विश्वकप क्रिकेटः बंगलादेशले राख्यो दक्षिण अफ्रिकासामु ३३१ रनको लक्ष्य - VOICE OF NEPAL
विश्वकप क्रिकेटः बंगलादेशले राख्यो दक्षिण अफ्रिकासामु ३३१ रनको लक्ष्य
१९ जेष्ठ २०७६, आईतवार १४:४६ 111 ??? ???????
इलाम,विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत आज बंगलादेशले दक्षिण अफ्रिकासामु ३३१ रनको विशाल लक्ष्य राखेको छ । बंगलदेशले ५० ओभरमा ६ विकेटको क्षतिमा ३३० रन बनाएको हो ।
बंगलादेशका लागि विकेट किफर व्याट्समेन मुश्फिक्यर रहिमले सर्वाधिक ७८ रन बनाए ।
शकिवअल हसनले ७५ रन महमुदुल्हाले नटआउट ४६ रन, सौम्या सरकारले ४२ रन बनाए । दक्षिण अफ्रिकाका लागि इमरान ताहिर, क्रिस मोरिस र एन्डिल फेहलुकवाओले समान २/२ विकेट लिए । विश्व स्तरिय बलर कागिसो रवडाले कुनै विकेट लिन सकेनन् ।
टस हारेर फिल्डिङ रोजेको साउथ अफ्रिकालाई बंगलदेशले दिएको ३३१ रनको लक्ष्य पिछा गर्न निकै मुस्किल हुने अनुमान गरिएको छ । दक्षिण अफ्रिकाका लागि अनुभवी व्याट्समेन हासिम अमला चोटका कारण आजको खेलमा छैनन् ।
अफ्रिकाका लागि अमला नहुनु निकै ठूलो क्षति हो । अफ्रिका अनुभवी वलर डेल स्टेनपनि खेलमा नहुँदा वलिङमा पनि मुस्किल बेहोरिरहेको छ । पहिलो खेलमा १०४ रनको हार भुलाउँदै आज व्याटिङको जिक्मा ओपनर डि कक र कप्तान डु प्लेसिसमा रहने छ । उनीहरुले टीकेर खेल्न सके अन्त्यमा मिलर म्याज विनिङ पारी खेल्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
खेललाई आफ्नो पक्षमा पर्नको लागि बंगलादेशले राम्रो वलिङ गरेर दक्षिण अफ्रिकाको टप अडरलाई असफल पर्न जरुरी छ । बंगलादेशसँग पनि निकै राम्रा बलरहरु छन् ।
कप्तानी मात्र छाडेको हो,ब्याट छाडेको छैन-पारस खड्का
किन छाडे पारसले कप्तानी?
को बन्ला अबको कप्तान ?पारसको राजीनामापछि बन्यो नेपाली क्रिकेटमा तरङ्ग !
नेपाली क्रिकेट टिमको कप्तानबाट पारसको राजीनामा
ग्रीसलाई २-० ले पराजित गर्दै इटाली बन्याे समूहविजेता
आइसीसी वरियतामा नेपालका पारस खड्काले धोनी र गेललाई उछिने !